Universal Code nke Conduct afọ 2021. Ịtụ alo/Ịma ọkwa - Meta
Universal Code nke Conduct afọ 2021. Ịtụ alo/Ịma ọkwa
Universal Code of Conduct agwa nke abụọ
Universal code of Conduct (UCoC) nke a na-ewepụta akparamagwa ozuru ụwa ọnụ nke onye otu Wikimedia ọbụla ga na-akpa n'ọrụ Wikimedia niile. Ọrụ a nọ n'agba nke abụọ,ebe usoro mgbaso akparamagwa doro anya di. Ị nwere ike ịgụ maka ihe niile gbasara ọrụ a na 'project page'
Otu kọmiti na-edepụta ihe: Akpọmoku itinye akwụkwọ ịchọ ọrụ/ihe
Otu Wikimedia na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ isonye n'otu Kọmiti ga -ahụ maka mmejupụta ezi akparamagwa ndị a. Ndị chọrọ iso n'otu a ga-etinye bido n'awa abụọ ruo awa isii n'ọrụ kwa izuka ọbụla bido n'ọnwa Eprel ruo Julai nakwa Ọnwa Ọctoba rue ọnwa Novemba. Ọdị mkpa na kọmiti a ga-anabata onye ọbụla bụ ndị nwere mmụta n'ọrụ dị iche iche, ma ndị chigoro ọzọ n'ọrụ Wikimedia nakwa ndị batara ọhụụ,ma ndị natara maọbụ kwenye,nakwa ndị eboro ebubo ụgha maka mkparị.
Itinye akwụkwọ na ịmụ usoro, Hụ Universal Code of Conduct/Drafting Committee.
ịtụ alọ ndị kọmiti n'afọ 2021: Ọkwa na akpọmoku for ndi ga-arụ ọrụ n'efu/ndị ntụgharị
Bido n'ọnwa Eprel dị na mkpụrụ ụbọchị ise wee ruo ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị ise, A ga-enwe mkparịtaụka di iche iche banyere ọrụ Wikimedia dị iche iche etu aga-esi mee ka ọnye ọbụla dewe iwu a. Anyị na-achọ ndị ga-enyere aka tụgharia isiokwu, ebunuche nakwa inye aka iguzobe mkparita uka ndị n'asụsụ ha site na iji atụmatụ key questions. Ọ bụrụ n'ị chọrọ isonye rụọ ọrụ n'efu biko contact us were asụsụ madsịrị gị mee nke a
Iji mụtakwuo mak ọrụ a nakwa mkparitaụka na-aga n'ihu, hụ Universal Code Of Conduct/2021 consultation.
-- Xeno (WMF) ( okwu)
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Universal_Code_of_Conduct/2021_consultations/Announcement/ig&oldid=21303016"